धुलोमैलो काम, फोर्ब्सको सूचीमा नाम
काठमाडौं । कलेजका दिनको के कुरा गर्नु ! जोसले भरिएको मन र मस्तिष्क । लाग्छ मैले चाहे भने संसारै जित्न सक्छु । अझ कक्षामा प्रोफेसरले पनि थपिदिन्छन्, ‘विजेताले अरूको बाटो पछ्याउँदैन । आफ्नो बाटो आफै कोर्छ ।’
अनि त के चाहियो र ? क्यान्टिन होस् वा ट्वाइलेट, बाटो होस् कि कलेज बाहिरको क्याफे थुप्रै योनजा बुनिन्छ । तर, एउटा योजना भत्किन्छ, अर्को बन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा एमीबीए अध्ययन गर्दा सचित पण्डित, निशान चण्डी श्रेष्ठ र सुवास श्रेष्ठको दैनिकी आम युवाभन्दा कत्ति फरक थिएन ।
एउटै उमेरले नजिकिएका उनीहरू खाजा खाँदा होस् वा बाटामा, पढाइ सकिएपछि के गर्ने भनेर कुरा गर्थे । निशानको परिवार पहिलादेखि नै निर्माण क्षेत्रमा भएकाले केही एक्साभेटर किनेर भाडामा लगाउने योजना बनाए । सुवासले अर्को योजना सुनाए, कतै चल्ने ठाउँमा रेस्टुरेन्ट पो खोल्ने हो कि ?
तर, थुप्रै योजना ‘गफ’ मै सीमित बन्यो । सायद् उनीहरूलाई कुनै एउटा त्यस्तो क्षण चाहिएको थियो, जसले कोरा सपनालाई साँच्चै पछ्याउनयोग्य व्यवसायमा परिणत गरिदियोस् ।
नभन्दै त्यो क्षण पनि आयोः १२ वैशाख २०७२ । संयोग मानौं वा विडम्बना, त्यही विनाशकारी भूकम्पबाट सिङ्गो राष्ट्र थलिएको बेला एउटा दूरदर्शी सपनालाई जन्म दियो । र, त्यही सपनालाई सार्थक बनाउने क्रममा तीन नेपाली युवा फोर्ब्सले निकालेको एसियाका ३० वर्षमुनिका ३० प्रभावशाली.व्यक्तिहरुको सूचीमा परेका छन्....